मोबाइल भिडियो विज्ञापनहरू बिक्री बिना कहानीको बारेमा छन् Martech Zone
गुगल मात्र नयाँ प्रयोगको नतिजा जारी गरियो त्यो निकै प्रभावशाली छ र यसको भिडियो मोबाइल उपकरणमा पहुँच विस्तार गर्न खोजिरहेका सबैले देख्नुपर्दछ। सरल शब्दमा भन्ने हो भने, हिजो तपाईंको अनुहारको विज्ञापन मोडेलले हाम्रो मोबाइल उपकरणमा काम गर्दैन।
माउन्टेन ड्यूसँग काम गर्दै, BBDO तीन फरक भिडियो उत्पादन। पहिलो मोबाइल उपकरणमा टेलिभिजन विज्ञापन राख्दै थियो। दोस्रोले मोबाइल दर्शकहरूको लागि तुरुन्त विज्ञापन प्लेसमेन्ट फ्याँकिरहेको थियो जुन बाहिर जान्छ। तेस्रो भिडियोले उत्पादलाई धकेनन्, तर कथा, परिणाममा २ view% मोबाइल दर्शकहरू भिडियो हेर्दै र आधा भन्दा बढि ब्रान्डलाई सम्झँदै.
यदि यो उल्लेखनीय लाग्दैन भने ... दिमागमा राख्नुहोस् कि तेस्रो प्रयोग हो Seconds० सेकेन्ड लामो अन्य दुई भन्दा!
प्रयोगको साथमा तीन अवसरहरू पत्ता लगाइयो
अप्रत्याशित शक्तिशाली हुन सक्छ। मानिसहरू तपाईंसँगै बस्नेछन्।
तपाईंको कथाको लागि समय लिनुहोस्। तिनीहरू छोड्नु भन्दा पहिले केवल तपाईंको ब्रान्डमा जाम नगर्नुहोस्।
यो तपाइँको ब्रान्ड सार्न को लागी एक विज्ञापन जस्तो देखिनु आवश्यक पर्दैन।
"मूल" गुगलको प्रयोगमा नियन्त्रणको रूपमा काम गर्‍यो। यो -०-सेकेन्ड स्पट हो जसमा तीनजना केटाकेटीहरू छन् जसले माउन्टेन ड्यु किकस्टार्ट लिन्छन्, नाच्न थाल्छन्, र बेसमेन्टमा सबै थोक - ओभरस्टफर्ड कुर्सीबाट कुकुर भित्र जान्छ।
यो -१-सेकेन्डको मोबाइल विज्ञापन पुन: ठूलो, बोल्ड उत्पादन शट र काउन्टडाउनको साथ सुरू हुन्छ, जुन केहि शान्त हुनेवाला छ। दर्शकहरूलाई त्यसपछि कार्यको बीचमा छोडिन्छ र कहानी त्यहाँ देखिन्छ।
"शुद्ध फन" रिकुटले दर्शकहरूलाई कार्यको बिचमा ड्रप गर्दछ कुनै संगीत वा के हुँदैछ भनेर कुनै वास्तविक भावनाको साथ। त्यसोभए संगीतले लात हान्छ र विज्ञापनले विभिन्न नृत्य तत्व देखाउँदछ। यो पहिलो मिनेट १ मिनेट 1 33 सेकेन्डमा दुई विज्ञापन भन्दा लामो छ।
टैग: bbdoगुगल विज्ञापनहरूGoogle +मोबाइल भिडियो विज्ञापनमोबाइल भिडियो विज्ञापनपहाडी शीत